लेख/ब्लग Archives - jagritikhabar.com
रुपनी जि एम । कुरा आजभन्दा ९ वर्ष अघिको हो । जतिबेला म मोफसलमा बसेर कुनै संस्थामा काम गर्दै थिएँ । सोही क्रममा मलाई थप तालिमकालागी भनेर काठमाण्डौको गोदावरी स्थित कुनै एउटा होटेलमा केन्द्रिय कार्यलयद्धारा बोलाईयो । म मेरा जिल्लाबाटा छनौट भए जस्तै अन्य...
बुद्धि मगर, हाल यूएई । यतिबेला जताततै चर्चा भिजिट भिसाको छ । नेपालीहरू ठगिएको, समस्यामा परेको, सरकारले समिति गठन गरेको यस्तै खबरहरू बारम्बार आइरहेका छन् । हो विदेशिनु हाम्रो बाध्यता जस्तै भएको छ । हर कोहीको आ–आफ्नै बाध्यता छ । बाध्यतामा फसेकाहरूलाई जतिसक्दो छिटो...
जीवन अर्याल :- धेरै नेपालीले आशा गरेको ब्यक्ती । तिम्रो पार्टिमा नेता मन पर्छ यि यि नेता भनेर अन्य पार्टिमा आस्था राख्ने साथिहरुले सबैभन्दा पैले योगेश भट्टराई भन्थे (भन्छन्) । यस्तै घटनाले खारिन सिकाउछ । अनि पाईला पाईलामा काडा हुन्छन ,नदेखिने काडा भन्ने सिकाई...
सुष्मा तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री ओलीको सपना, उनको योजना रेल यथावत विपना भइदियो- रेल आयो ! सामाजिक संजाल आज भोलि यति छिटो छ कि बहस, पैरवि, फैसला बनेर कुनै पनि बिषय घडिको सुई चले जस्तै सेकेण्डमै आइहाल्छ। नेपालको कुना मात्र होइन विश्वको हरेक कुनामा पुगेका नेपालीलाई...
मीना ढकाल, उनको उमेर सायद ४५ को हाराहारीको हुँदो हो। तर उनको चुरीफुरी १६ वर्षे युवतीको भन्दा कम छैन। रमाइलो गर्ने उमेरले होइन, मनले हो, चाहनाले हो, रहरले हो भन्ने गतिलो उदाहरण हुन् उनी। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनका १२ हजारभन्दा बढी फलोअर छन् भने...
पत्रकार महिलाको दर्दनाक पीडा
राधा शर्मा । फूलको जीवन काँडा बनाउनेका नाममा कुनै पनि उपन्यास लेखक अथवा चलचित्र निर्माताले समेत परिकल्पना गर्न नसकेको मेरो जीवनको भोगाइ । एकै निमेशमा जीवन उचालियो, पछारियो फेरि बौरिँदै छ । अरू सामान्य केटीजस्तै घर, आमा–बाबाको काख, जागिर, समाजको साथ, साथीभाइको मायामा रमाइरहेको...
नेपालीहरुको दोस्रो ठुलो चाड तिहार हो । यो पर्व कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीको दिन काग तिहारवाट शुरु भएर कार्तिक द्वितियाको दिन अन्तिम दिन भाईटीका वाट सकिन्छ । यस चाडलाई फलफुल, उज्यालो पर्वको रुपमा पनि मानिन्छ। नेपालमै नेपालीहरु विच पर्वको नाम तिहार तर मनाउने तरिका फरक...
नेपालको नक्सा सदाको लागि अन्त हुदा
डा.कल्याण । भारत र चीन दुवैले (मिलेर साच्चैनै) चाहे भने नेपालको नक्सा सदाको लागि अन्त गरिदिन सक्छन। राष्ट्रसंगले चिन्ता व्यक्त गर्न बाहेक अरु केहि गर्न सक्दैन। हाम्रो देशको सिमा जोगाउन भनेर पैसा र ज्यान फालेर युद्ध गर्न (अहिलेको मितिसम्म) कुनै देश आउने देख्दिन। हामीसंग...
किन पक्राउ परेनन् पूर्वसभामुख महरा ? यस्तो छ कारण
– कमल पाठक पुडासैनीको भिडियो भाईरल हुने बित्तिकै रबि लामिछानेलाई जाहेरी नपर्दै समात्ने प्रहरीले कृष्णबहादुर महरालाई किन पक्राउ गरेन ? महराले जबरजस्ती गरेकै हुन, जाहेरी नपरे पनि प्रहरीले महरालाई पक्राउ गर्न सक्छ र गर्नु पर्छ । कानुन सबैलाई समान किसिमले लागू हुनु पर्छ ।...